Sida loo sameeyo alaabta Amazon aad u iibsato?
Haddii aad la yaabto waxa laga iibiyo Amazon ee 2018, maqaalkani wuxuu noqon doonaa mid xiiso leh. Halkan waxaan ka wada hadli doonaa sirta guulaha ee Amazon iyo waxyaabaha kuu keeni doona faa'iido. Waxaa intaa dheer, waxaan ku dhex mari doonaa dhibaatooyinka aasaasiga ah ee iibinaya Amazon si ay kaaga caawiyaan inaad ka fogaato khaladaadka caanka ah.
Sidee loo baadigoobaa alaabta rajada leh ee iibinta on Amazon?
Qeybta hoose ee ganacsigaaga Amazon, waxaad u baahan tahay inaad hesho waxyaabo ay u badan tahay in ay faa'iido iyo si fiican loo iibsaday. Waa talaabo aad u culus oo u baahan waqti iyo dadaal. Nasiib wanaag, Amazon wuxuu ku siinayaa macluumaad badan oo aad u baahan tahay si aad u bilowdo.
Waxyaabaha ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad hubiso waxa ama tan sheyga oo faa'iido kuu leh sida iibiye. Waa inaad aaddaa dhinacyada kala duwan ee kharashka maraakiibta, suuqyada suuqa, nasiib darro, mawaadiicda macaamiisha iyo dabeecadaha macmiilka ee ku saabsan alaabta fasalka. Doorashadaadu waa inay buuxisaa inta badan shuruudaha soo socda.
Qodobbada la iibsan karo iyo kuwa la iskudhin karo ayaa kaa caawin doona inaad samayso xulashada wax soo saarka saxda ah:
qiimaha wuxuu noqon doonaa ilaa 35% qiimahaaga qiimaha iibka ah;
qiimaha iibka bartilmaameedka u dhaxeeya $ 10- $ 50;
ma ahan maraakiib dhib ah sababtoo ah khafiifinta alaabta (2-3 rodol). max);
waa mid la doorbido in alaabtaadu ay noqoto mid aan dhib badnayn oo sahlan;
iska ilaali alaabooyinka xilliyada ama fasaxyada macaamiisha ah maaddaama aysan kuu keeni doonin waxtar sannadka oo dhan;
alaabtaada waa in lagu kala soocaa tayada tayada sare leh iyo midda kaleba.
Marka lagu daro dhamaan arrimaha kor ku xusan, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in sheyga uu ku jiro baahi weyn, ama uusan ka helin raalli ahaanshaha dukaamada Amazon. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in alaabtu aysan haysan tartan aad u badan maadaama ay yaraynayso fursadahaaga inaad ka soo baxdo dadka badan.
Qaar ka mid ah qodobbada muhiimka ah waxay tilmaamayaan heerka baahida alaabta ee Amazon:
badeecada aad dooratid waa in aan dib loo celinin suuqyada weyn ee Amazon ama shirkadaha waaweyn;
badeecadaha isku midka ah ayaa leh Amazon Best-seller rank of 5000 ama ka hooseeya qaybta ugu muhiimsan;
liiska alaabooyinka la midka ahi ma aha mid caan ka ah dadka isticmaala;
maqnaansho dib u eegis sheyga;
ereyada muhiimka ah ee wax soo saarka ah waxay leeyihiin wax ka badan 100,000 raadinta bisha.
Marxaladda labaad ee cilmi-baarista suuqyada, waxaad u baahan tahay inaad hubiso macluumaadka bogagga alaabta ee waxyaabaha la xiriira. Liiska wax soo saarku wuxuu kuu sheegi karaa waxyaabo badan oo ku saabsan tayada waxtarka iyo faa'iidooyinka. Marka la furo bogga wax soo saarka Amazon, fiiro gaar ah u yeelo qiimaha, qiimaha maraakiibta, cabbirka badeecada, miisaanka maraakiibta, iyo heerka Amazon bestseller. Fikrad gaar ah waa in la bixiyaa celceliska celceliska macaamiisha iyo darajada xiddigaha. Nambarka iyo tayada dib u eegista alaabtu waxay muujinaysaa jawaab celinta isticmaalka sheyga gaarka ah iyo caankiisa.
Sidee Amazon Best Buyers ayaa kuugu caawin kara inaad samayso doorasho xigmad leh?
Amazon Best seller Best seller waa liiska TOP 100 iibinta walxaha dhammaan qaybaha. Liistada liiskan waxay ku kala duwanaan kartaa maalin kasta. Haddii aad ku jirto nidaamka xulashada alaabta qiimaha leh si aad uga iibisid Amazon, qaybtaani waxay noqon doontaa mid xiiso leh si aad u eegto. Laga soo bilaabo boggan, waxaad ku dari kartaa 100 TOP ugu iibiyeyaasha ugu fiican ee qaybaha iyo qaybaha kale. Macluumaadkani wuxuu noqon karaa mid qaali u ah habka cilmi baarista.
Waraaqo cusub oo kulul
0) Qeybtaani waxay muujinaysaa alaabooyinka soo socda ee caan ku noqday oo si wanaagsan loo iibsaday markii ugu dambeysay. Xogtaasi waxay ku saleysan tahay Amazon wax soo saarka liiska iyo falanqaynta. Halkan waxaad ku dhejin kartaa si aad u aragto Release New Hot ee qaybo gaar ah iyo subcategories. La soco in xogtan la badali karo wakhti ka dib.
Dhaqdhaqaaqayaal iyo qandho
Qeybtaani waxay ku tusineysaa alaabooyinka si dhakhso ah ugu soo guuraya Suuqa Sumeeyaha ee dhammaan qaybaha. Sida caadiga ah, waxaa ka mid ah isbedelka kulul iyo iibka xilliyada. Alaabooyinkaasi qiimo gaar ah u leh sida ay caan u yihiin iyo rajo-gelinta, laakiin wali maaha kuwo tartan ah. Waxaa intaa dheer, qaybtaani waxay noqon kartaa mid wax ku ool ah si aad u hesho waxyaabo kulul.
Ugu damacsan yahay
Halkan waxaad ka heli doontaa badeecadaha ugu caansan Amazon. Si kale haddii loo dhigo, dukaamada Amazon waxay keydiyaan waxyaalahan liiska ay rabaan. Ma sheegeyso iibsashada balse wali waxay muujineysaa doorashooyinka macaamiisha.
Halkan waxaad ka arki doontaa alaabta ay dadka iibsanaya Amazon inay iibsadaan hadiyadaha. Waa calaamad wanaagsan oo loogu talagalay iibiyeyaasha ugu wanaagsan ee ku jira qaybaha nuucyada badan ee xilliyada cimilada, iyo waxyaabaha la xiriira fasaxyada. Dhibaatooyinka caadiga ah ee iibiya Amazon
Bixiyeyaasha waxay heli karaan lacagtooda kaliya dhowr toddobaad gudahood
Haddii aad alaabtaada ku iibiso Amazon, waxaad u baahan tahay inaad raacdo shuruudaha Amazon ama Vendor Central. Sida laga soo xigtay iyaga, lacag bixinta waxaa lagu sameyn karaa lacag dhigasho toos ah illaa 14kii maalmoodba mar. Ma jiraan nidaamyo kale oo lacag bixin ah oo aad u isticmaali karto Amazon. Waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso arrintan marka aad qorsheyneyso istaraatiijiyada ganacsigaaga. Tusaale ahaan, haddii aad dakhligaaga ka iibsanaysid iibka si aad u iibsato alaabooyinka cusub si aad u gadatid, waxay noqon kartaa xayeysiin ganacsi.
Caqabadaha soo gala
Maalmahan, ma fududa inaad noqoto iibiyaha Amazon sidii hore. Waxaa jira dad badan oo iibiya kuwaas oo jebiya shuruucda Amazon oo aan faa'iido u lahayn mashiinka. Taasina waa sababta ay Amazon u noqotay mid aad u adag oo u ogolaanaya ganacsatada inay iibiyaan alaabta ay ku jiraan mishiinka. Iibiyaasha doonaya dharka tafaariiqda, kabaha, baabuurta baabuurta iyo noocyada kale ee qiimaha badeecadda, waxay u baahan yihiin inay helaan oggolaansho Amazon.
Adiga ayaa kugu adkaan doona inaad dhisto faahfaahinta jawaabta
SERP. Waxaa intaa dheer, waxaa reebban in lagu dhiirrigeliyo dadka isticmaala jawaab celinta alaabtaada. Haddii Amazon uu ogaado in jawaab-celintaada aysan ahayn mid organic, dhammaantood waa la tirtiri doonaa oo waxaad lumin doontaa darajadaada Source .